Fancy – Channel Myanmar
Magic to Win (2011) ထူးခြားဆန်းပြားမှုတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက ကိုယ်စီ သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘဝနေထိုင်မှုအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ ဘော်လီဘောအရှုံးကြောင့်စိတ်ညစ်နေတဲ့ ချန်မေစီတစ်ယောက် အမှတ်မထင် သူ့ရဲ့ဆရာ ပါမောက္ခကန်နဲ့တိုက်မိပီး သဘာဝလွန်မှော်စွမ်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ် မှော်စွမ်းအားကို သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုအတွက် လူငယ်ပီပီရမ်းသမ်းအသုံးချနေခဲ့ပါတယ် တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ မီးမှော်ဆရာရဲ့ မှော်အစွမ်းလုယူမှုကြောင့် မှော်အစွမ်းဆုံးရှုံးပီး ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ လေလွင့်နေတဲ့ မြေမှော်ဆရာလေး လင်းဖုန်းနဲ့အမှတ်မထင်တွေ့ဆုံရင်း မှော်ပညာလောကကအရှုပ်ထုပ်တွေအကြား ပါဝင်ခဲ့ရပြန်ပါတယ် အချစ်ဟာသလေးနဲ့ ထူးခြားမှုလေးတွေကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ တစ်ဖက်မှာလည်း အတိတ်မှာ မိသားစုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ အတိတ်ကိုပြန်ရချင်ပီး ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ မီးမှော်ဆရာလေးက မှော်တံခါးပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့ မှော်ပညာရှင်တွေဆီကအစွမ်းတွေလိုက်စုပ်ရင်း သော့ချက်ကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ် ကဲ လင်းဖုန်းရဲ့ဝိညာဉ်ဘဝကို မေစီကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား မီးမှော်ဆရာရဲ့လက်ထဲကနေရော ပြေးလို့လွတ်ကြမလား လောကမှာ ဘယ်လိုအချိန်တွေကပုံရိပ်တွေဖြစ်ပီး ဘယ်လိုအချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါသလဲ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်တည်လာရင် ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းမရှိပါစေ လောကကြီးအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းလေးတွေကို လုပ်က်ုင်ပီး လောကကြီးကို ကျေးဇူးဆပ်သင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဟာသလေးရောပီး တင်ဆက်ထားတဲ့ကားကောင်းတစ်ကားပါ ပင်ပန်းထားသမျှတွေ အဝေးကိုခေတ္တလွှင့်ပစ်ဖို့ Magic To ...
Crimson Peak (2015) သရဲကား (သည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်လို့ခေါ်ရင်ပိုကောင်းမလား) တွေကြည့်ရင် တည်နေရာနောက်ခံကလည်း အများကြီးစကားပြောပါတယ်။ အိပ်ခန်းထဲမှာသရဲခြောက်တာ (The Ring) ဆင်ခြေဖုံးကတိုက်ခန်းမှာသရဲခြောက်တာ (Paranormal Activities) သစ်တောထဲမှာ သရဲခြောက်တာ (Blairwitch Project) စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ့။ ခေတ်ကာလနောက်ခံကလည်း အရေးပါသေးတယ်ဗျ။ ထိတ်လန့်သည်းဖိုရုပ်ရှင်အများစုဟာ ရှေးခေတ်ကာလတွေမှာဇာတ်အိမ်တည်လေလေ ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းလေပဲ။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ၁၉ရာစုနှောင်းပိုင်းကနေ ၂၀ရာစုအစောပိုင်း ဝန်းကျင်မှာဇာတ်အိမ်တည်ရင် ကြည့်ရတာအရသာအရှိဆုံးပဲ။ နောက်ဆုံးကြည့်ဖြစ်တဲ့ The Woman in Black လို ဂေါ့သစ်ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေပေါ့။ အဲ့ဒီခေတ်ကာလ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ၊ အမြဲတမ်းမှုန်မှိုင်းအေးစက်နေတတ်တဲ့ ကျေးလက်ပိုင်းရာသီဥတု၊ ဇာတ်ကောင်တွေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကအစ ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်လမ်းကို ပိုအရသာရှိစေတယ်၊ အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ အေးတိအေးစက်မျက်နှာထားတွေကြောင့် ရုပ်ရှင်ကပိုပြီးကျောချမ်းစရာဖြစ်လာတယ်။ခုလည်းအဲ့လိုဇာတ်ကားတစ်မျိုးလာပြန်ပါပြီ။ ဗစ်တိုးရီးယားခေတ် (၁၉ရာစု) ကိုနောက်ခံထားပြီး၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Cumbria မြို့လေးမှာဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ ဝမ်းသာစရာက ဒီနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၆ရက် USAမှာ စထွက်မှာဆိုတော့သိပ်ကြာကြာမစောင့်ရတော့တာပဲ (မြန်မာနိုင်ငံရောက်ဖို့ဆို ၈လကနေ ၉လအတွင်းလောက်ပေါ့)။ ဇာတ်လမ်း၊ ဒါရိုက်တာ Guillermo del Toro ဖြစ်ပြီး Legendary Pictures နဲ့ Universal ...
Wonderful Nightmare (2015) ဒီဇာတျကားလေးကတော့ သဘာလှနျဖွဈရပျလေးတှေ ပါဝငျနတေဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။ တဈကားထဲနှငျ့ အခဈြ အလှမျး မိသားစုသံယောဇဉျ ဟာသ စိတျဓါတျခှနျအားစတာတှအေားလုံးခံစားရရှိနိုငျတယျလို့ အာမခံပါတယျ။ အဓိက သရုပျဆောငျတှကေတော့Romanace of the Witch ဇာတျလမျးတှဲမှ မငျးသမီးကွီးနဲ့ကြှနျတျောတို့မွနျမာပရိသတျကွီးအခဈြတျော ဂြှနျစော မငျးသားကွီးပါပဲ...ဇာတျလမျးလေးကတော့...• ရှနေ့ေ လီယှနျဝူးဆိုတဲ့ အပြိုကွီးမမတဈယောကျကနေ စတာပါပဲ။ အပြိုကွီးမမက ငယျငယျထဲက အဖဆေုံးသှားခဲ့ပွီး အဖကေို ခဈြလှနျးလို့လှမျးဖြားလှမျးနာကနြတေဲ့အမနှေငျ့ နခေဲ့ရပွီး အမကေလညျး နောကျထပျနှဈအနညျးငယျမှာ ကှယျလှနျသှားတော့ ငယျငယျ ကတညျးက ခိုငျခိုငျမာမာ ဆုံးဖွတျခကျြခခြဲ့တယျ။မိသားစုဘဝကို ဘယျတော့မှ မထူထောငျဘူး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျနိုငျရမယျ တဈကိုယျတညျး အပြိုကွီးဘဝပမေယျ့ အောငျမွငျနရေမယျဆိုပွီးတော့ပေါ့။တကယျလညျးအောငျမွငျတဲ့ဘဝ ထူထောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ... ဒါပမေယျ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ငှကွေေးနောကျကို လိုကျလှနျးတော့လညျးမုဒိမျးမှုမှာတောငျ တရားခံဘကျကနေ ရှနေ့လေိုကျပေးတဲ့ အပြိုကွီးမမရှနေ့မေကွီးပေါ့.. • တဈရကျမှာတော့ မထငျမှတျပဲ မတျောတဆကားတိုကျမှုဖွဈပွီးသဆေုံးသှားပွီဘဝမကူးခငျ နရေတဲ့ကွားဘုံကို ရောကျသှားပါတော့တယျ။တကယျတော့ သူမဟာသဆေုံးခြိနျမတိုငျပဲ ကွားဘုံမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့နတျသားတှရေဲ့ မှားယှငျးခကျြကွောငျ့ ...
Bakit hindi ka crush ng crush mo? (2013) "Bakit hindi ka crush ng crush mo? " ဇာတ်ကားဟာ ပုံမှန်မြန်မာဇာတ်ကားတွေလိုပဲ ချစ်ကြိုက်ကွဲညား ရိုက်ကူးထားတယ် ဆိုပေမယ့် IMDb ratting မှာ 6.6 အထိရရှိထားတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်... ဖိလစ်ပိုင်ကားတကားအနေနဲ့ ဘာလို့ Rating အဲ့လောက်ထိရထားတာလဲဆိုတာကတော့ ဇာတ်ကားကိုကြည့်မိရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်...ဇာတ်ကားနာမည်က အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Why your crush won't crush you back? လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Fancy Drama ဇာတ်ကားဆိုပေမယ့် သူပေးချင်တဲ့ Massage ကို ထိထိရောက်ရောက်ပေးနိုင်အောင်ရိုက်ကူးထားပါတယ် အချစ်စစ်ဆိုတာက လုပ်ယူလို့ရနိုင်လား လုပ်မယူပဲနဲ့ ရင်ဘတ်ရဲ့တနေရာရာမှာရှိနေလားဆိုတာ crush ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ရိုက်ကူးထားပုံပေါ်ပါတယ်....:P ချစ်သူနှစ်ဦးကြား လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိစ္စဟာ ချစ်ကြိုက်ခင်မှာဖြစ်သင့်လား ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူဘ၀မှာ အချစ်ကြည့်သက်သက်သီးသန့်ခံစားကြပြီ အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှသာ လိင်ဆက်ဆံသင်ကြလားဆိုတဲ့ အခုခေတ်လူငယ်တွေမမှားသင့်တဲ့အမှားတွေကို မြင်သာအောင်ရိုက်ပြထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျရှုံးလုလုဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ တေးစီးရီးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကို အဖိုးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် အယ်လစ်တယောက် မဖြစ်မနေကိုင်တွယ်ရမယ့်အရေးနဲ့ကြုံလာပါတော့တယ် ကုမဏ္ဏီရဲ့ကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ စရိတ်လျော့ဖို့ ၀န်ထမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေထုတ်ရတော့မယ့်အချိန်မှာ တကယ့်အချစ်စစ်အချစ်မှန်ကိုသာယုံကြည်တဲ့ ဆန်ဒီနဲ့ ကုမ္ပဏီမှာဆုံတွေ့ကြပါတော့တယ် ဆန်ဒီကလည်း ယောက်ျားလေးတွေထားထားသွားလို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့အချိန် အယ်လစ်ကလည်း ခိုင်းစေချက်ကြောင့် မဖြစ်မနေကျဉ်းထဲကြပ်ထဲရောက်နေတဲ့အချိန် မှာတော့ ဇာတ်ကားရဲ့ နာမည်အတိုင်းပဲ "Why your crush ...
The Three Musketeers (2011) ဒီဇာတျလမျးဟာ Alexandre Dumas ရဲ့ သူရဲကောငျး ၃ ယောကျဝတ်ထုကို အခွခေံထားပွီးမှ ဇာတျညှနျးဆနျးသဈပွီး ပွနျရိုကျထားတာပါ။ ၂၀၁၁ ထှကျဖွဈတာမို့ မွငျကှငျးတှနေဲ့ ရိုကျခကျြတှကေ ကောငျးမှနျပါတယျ။ ဇာတျလမျးကတော မူရငျးလောကျမကောငျးတာအမှနျပါပဲ။ အကျရှငျ စှနျ့စားခနျးကောငျးတှကေို အားပေးခငျြသူတှအေတှကျ အဆငျပွမှောပါ။ ---------------------------------------------------- ဒီဇာတ်လမ်းဟာ Alexandre Dumas ရဲ့ သူရဲကောင်း ၃ ယောက်ဝတ္ထုကို အခြေခံထားပြီးမှ ဇာတ်ညွှန်းဆန်းသစ်ပြီး ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ ၂၀၁၁ ထွက်ဖြစ်တာမို့ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ရိုက်ချက်တွေက ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော မူရင်းလောက်မကောင်းတာအမှန်ပါပဲ။ အက်ရှင် စွန့်စားခန်းကောင်းတွေကို အားပေးချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ File Size : 792 MB Duration : 1: 50: 28 Quality : Bluray 720p Translator : Bo Phway Encoder : Littleneo
Step Up All In (2014) Step Up All In (2014) Steup Up လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိတ်သတ်တွေ ဘာဇာတ်ကားလည်းဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဇတ်လမ်းအနေနဲ့ကတော့ အကမှာအောင်မြင်ပြီး ဆုတံဆိပ်ရရှိချင်နေတဲ့ Sean ဟာ သူ့နဂိုအဖွဲ့ကလူတွေနဲ့ကွဲသွားပြီးတော့ သူ့သူငယ်ချင်း Moose ဆီကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ထိုအတော်အတွင်း Last VEGAS မှာ The Vortex ကပြုလုပ်တဲ့ အကပြိုင်ပွဲတစ်ခုရှိပြီး အနိုင်ရရှိတဲ့အဖွဲ့ဟာ ၃ နှစ်စာချုပ်နဲ့ MTV စသည့်တွေမှာ ပါဝင်ဖော်ျဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။Moose ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေဟာ အကသင်တန်းတစ်ခုဖွင့်ထားပြီး Moose ကတော့ နဂိုတုန်းက ကခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ တခြားအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကာ မကဖြစ်တာလည်း ကြာသွားပါပြီ။ Sean ဟာ Moose ကို ပြန်ကဖို့တိုက်တွန်းပြီး အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီး သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အကအဖွဲ့ထဲကို ၀င်ရောက်လာသူကတော့ ANDIE ဖြစ်ပြီး Moose ရဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ ထို့အတူ ...